I-theory heating theory pdf | imigaqo yokufudumeza ye-induction
INDAWO YOKUJONGA Kwaqatshelwa okokuqala xa kwafunyaniswa ukuba ubushushu buveliswa kwi-transformer nakwi-motor windings, njengoko kuchaziwe kwiCandelo "UkuTshisa ukuTshisa kweMetali" kule ncwadi. Ngokuhambelana, ithiyori yokufudumeza yokungenisa ifundwe ukuze i-motors kunye nabaguquli bakhiwe ngokusebenza ngokugqibeleleyo ngokunciphisa ilahleko yokufudumeza. Uphuhliso lwamandla ombane wempembelelo ephezulu lubonelela ngeendlela zokusetyenziswa kobushushu bokungenisa ubukhuni bomhlaba. Ukusetyenziswa kwangaphambi kokungeniswa kubandakanya ukubandakanyeka kwilingo kunye nempazamo ngolwazi olwenziweyo lobuqu
ukusetyenziswa, kodwa ukusilela kokuqonda Imigaqo yokufudumeza. Kuyo yonke iminyaka ukuqonda kwemigaqo esisiseko kwandisiwe, okwandayo ngoku kungumzekelo wekhompyuter wezicelo zokufudumeza kunye neenkqubo. Ulwazi ngezi theori zisisiseko zokufudumeza ngaphakathi kunceda ukuqonda ukusetyenziswa kobushushu bokungeniswa njengoko kusenziwa kunyango lobushushu. Ukutshisa ukufudumeza kwenzeka ngenxa yecandelo lombane wombane ovelisa amandla ombane kwinxalenye. Amalungu obushushu ngenxa yokumelana nokuhamba kwalo mbane wombane… ..
iindidi Ukufudumeza Ukufudumeza kwePDF tags isiseko sokufudumeza kokwenziwa, lokutshisa, ukufudumeza kokufudumeza iziseko zepdf, ukufudumeza kwento, imigaqo yokufudumeza induction pdf, ukuchithwa kwefuthe lokutshisa, i-theory heating theory pdf, i-pdf yokufudumeza Post yokukhangela